China AIRMOVE Movable PMSM Portable Fan Manufacturing and Factory | Kale
Feo ambany 1.6m 2m Airmove Portable Fan
Ny andiany Airmove no mpankafy finday farany tosika tanana miaraka amin'ny habetsaky ny rivotra lehibe novolavolain'i Kale; ny totalin'ny haavon'ny mpankafy dia 2m, ary ireo casters efatra dia afaka mihetsika malalaka ao an-trano sy any ivelany. Ny lelany mpankafy dia entin'ny motera synchronous andriamby maharitra PMSM miaraka amin'ny vokatra lehibe. Ny Airmove dia afaka mitondra ny vokatra mangatsiaka mitovy amin'ny mpankafy kely mihoatra ny 20. Ny mpankafy dia maivana sy maharitra amin'ny ankapobeny, ary azo ampiharina amin'ny ankamaroan'ny toerana misy tontolo sarotra kokoa.
Ny halaviran-drivotra lava be, ny halaviran'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra dia mihoatra ny 24m, izay afaka mandrakotra ny ankamaroan'ny halavan'ny kianjan'ny basketball;
Namboarina tamin'ny casters 4, azo afindra malalaka any amin'ny toerana ilana rivotra anatiny na ivelany
Ny totalin'ny herin'ny mpankafy dia 0.55kW, ny fanjifana angovo dia ambany dia ambany, ary ny vidin'ny angovo ho an'ny andro fiasana iray manontolo dia dolara vitsivitsy monja;
Mangina sy mitabataba
Ny tabataba dia ambany dia ambany, ny haavon'ny tabataba dia 43dBA, rehefa mandeha ny mpankafy dia tsy hisy fiantraikany ny feo miresaka eo akaikin'ny mpankafy;
PMSM andriamby maharitra synchronous maotera mitondra ny mpankafy lelany, stepless matetika fiovam-po fitsipika hafainganam-pandeha, ny mpankafy dia azo fehezina malalaka, ny fandidiana dia tsotra sy mety;
Rano sy vovoka
miaraka amin'ny kilasy fiarovana IP55 sy ny fahombiazan'ny tantera-drano amin'ny ankapobeny, ny mpankafy dia azo ampiasaina amin'ny fomba mahazatra amin'ny orana sy ny tontolo mando; mora ny manadio ary rehefa manadio, tsy mila disassemble ny frame sy mivantana hosasany amin`ny rano paompy;
Ny mpankafy amin'ny ankapobeny dia endrika modular, ary ny module tsirairay dia azon'ny mpampiasa apetraka. Raha mila entina any amin'ny toeran-kafa izy, dia mila mamoha ny mody tsirairay fotsiny, ary mametraka azy manontolo rehefa tonga any amin'ny toerana haleha.
Kale Airmove PMSM motera tombony:
(1) Fahombiazana avo: Rehefa tafiditra ao anaty rotor ny akora andriamby maharitra, ny rotor sy ny saha andriamby stator dia hiasa synchronously mandritra ny fandidiana mahazatra. Tsy misy ankehitriny induced amin'ny rotor winding, tsy misy rotor fanoherana sy hysteresis very, izay manatsara ny fahombiazan'ny ny maotera.
(2) Fatorana mahery vaika: Tsy misy fientanam-po amin'izao fotoana izao ao amin'ny rotor PMSM, ary ny fihodinan'ny stator dia manolotra enta-mavesatra. Ny herin'ny motera dia manakaiky ny 1, izay mampihena ny stator ankehitriny ary manatsara ny fahombiazan'ny motera.
Mampiasà zezika avo lenta sy teknolojian'ny mpitatitra matetika mba hahatonga ny mpankafy manomboka milamina sy mandeha tsy misy feo. Escort fitaovana maharitra ela: potentiometer nomerika, switch knob, capacitor electrolytique ary asa tsotra hafa, mora ampiasaina: mitahiry ahiahy, ezaka ary fotoana!
Ny lelan'ny vokatra dia manangana ny endrika wavy streamline, ny mpamorona Eoropeana sy Amerikana dia mandray anjara amin'ny famolavolana endrika iraisam-pirenena, ny mpankafy dia afaka mampiasa loko isan-karazany mba hanomezana ny filan'ny mpanjifa samihafa.
teo aloha: AIRFREE Industrial / Commercial Wall Mounted Fan
Manaraka: EURUS II ampiasaina amin'ny indostrian'ny valindrihana fan
Pmsm Hvls Ceiling Fan
Pmsm Varavarankely lehibe